Budata Snake io APK maka Android
Budata Snake io
Budata Snake io,
Snake io APK nwere mgbagha dị mfe nke nwere ike ịghọ ihe riri ahụ nime obere oge mgbe egwuchara ya otu ugboro; kamakwa egwuregwu nka nka na-atọ ụtọ.
Na Snake.io, egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na smartphones na mbadamba gị site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, usoro dị na egwuregwu Agar.io, nke ewepụtara obere oge gara aga wee nweta otuto dị ukwuu, jikọtara ya na Ọdịdị nke kpochapụwo egwuregwu Snake.
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ isi negwuregwu ahụ bụ ime ka obere agwọ anyị rie ntụpọ ma mee ka ọ bụrụ agwọ kasịnụ. Ka anyị na-arụ ọrụ a, anyị na-alụso agwọ ọgụ nke ndị egwuregwu ndị ọzọ na-achịkwa na mpaghara nwere oke.
Na Snake.io, agwọ anyị na-akawanye ogologo ka anyị na-eri ntụpọ. Ka agwọ nke ndị egwuregwu ndị ọzọ na-akawanye ogologo, ohere ahụ na-adị ntakịrị. Ọ bụrụ na i jiri agwọ nke ị na-achị taa agwọ ọzọ, egwuregwu ahụ akwụsị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji kpachara anya mgbe ị na-eri isi ihe. Agwọ ndị na-ata agwọ ọzọ na-agbajikwa, ị nwere ike too ngwa ngwa site na iri iberibe ndị a. Na Snake.io, ị nwere ohere ime nke ọma ọbụlagodi na ị bụ obere agwọ.
Na Snake.io, ọ ga-ekwe omume iji nwa oge mee ngwa ngwa wee duhie ndị mmegide gị site nitinye uka.
Agwo io APK gam akporo egwuregwu atụmatụ
Egwuregwu agwọ ochie.
Egwuregwu ọtụtụ egwuregwu efu.
Egwuregwu riri ahụ efu.
Ihe omume ọnụ.
Gwuo na-enweghị ịntanetị.
Rie ka agwo too nubi juputara na nri. Kpọọ ụdị egwuregwu agwọ ahụ na-atọ ụtọ io ma ọ bụ gosi echiche gị maka akara dị elu na egwuregwu agwọ kpochapụrụ na ekwentị.
Gosi ndị egwuregwu ndị ọzọ ka ị dị mma negwuregwu agwọ. Were enyi gị soro gị na-asọrịta mpi nụdị egwuregwu abụọ. Ọ dịghị mma na egwuregwu agwọ? Zụlite onwe gị site nikiri egwuregwu agwọ na YouTube.
Nagbanyeghị ngwaọrụ ị na-egwu, ị ga-egwu nke ọma. Egwuregwu agwọ bụ nefu, na-enye egwuregwu dị ụtọ na njikwa joystick mkpanaka. Ịchọghị ịlụ agwọ ndị ọzọ na agwọ onyeisi? A na-agbakwunye mmemme na-atọ ụtọ ọhụrụ nechiche dị iche kwa ọnwa.
Egwuregwu agwọ anaghị achọ njikọ ịntanetị. Mgbasa ozi na-egbochi ahụmịhe egwuregwu gị? Gbanyụọ ịntanetị wee jiri obi ụtọ gwuo egwu. Egwuregwu arcade kpochapụwo na-ezute ihe ịma aka bọọdụ ndu nịntanetị na egwuregwu agwọ na-eri ahụ ọhụrụ a. Soro nde ndị egwuregwu. Gosi na ị bụ onye ọkpụkpọ agwọ kacha dị ndụ.
Snake io na-enye egwuregwu dị nro, ngwa ngwa yana njikwa emebere ka egwu ya nke ọma na ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla. Ị nwere ike ibudata Snake io APK, nke na-agbakwụnye ọbụna obi ụtọ karịa egwuregwu agwọ na mmemme ndụ na ụdị ntanetị, ma ọ bụ site na Google Play na ekwentị gam akporo gị nefu.
Snake io Ụdịdị
Mmepụta: Amelos Interactive